‘फान अवार्ड २०७३’ मा नायिकाहरु देखिए यस्ता ‘हट’ पहिरनमा, को कति ‘हट’ ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrity‘फान अवार्ड २०७३’ मा नायिकाहरु देखिए यस्ता ‘हट’ पहिरनमा, को कति ‘हट’ ? (भिडियो)
March 30, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
नेपाल चलचित्र कलाकार संघको आयोजनामा शुक्रबार ‘फान अवार्ड २०७३’ सम्पन्न भएको छ । २४ विधाका लागि सम्पन्न फान अवार्डमा नायिकाहरुको हट पहिरन निकै हेर्न लायक रहेको थियो । सदाबहार नायिका करिष्मा मानन्धरदेखि अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चामा आईरहेने नायिका साम्राज्ञीसम्मको पहिरनको निकै चर्चा परिचर्चा भएको थियो । आफ्नी छोरीसँग कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरेकी नायिका मानन्धर ‘वान पिस’ मा सजिएकी थिईन् । उनी निकै सुन्दरी देखिएकी थिईन् ।
त्यस्तै, ‘वान पिस’ मै सजिएकी नायिका साम्राज्ञी पनि निकै हट देखिन्थिन् । उनी अभिनता नाजिरसँग कार्यक्रममा प्रवेश गरेकी थिईन् । उता अभिनेत्री दीपाश्री भने साडी र ब्लाउजमा सजिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएकी थिईन् । त्यस्तै, प्रेमगीत बाट चचाृमा आएकी पुजा शर्मा, नायिका रेजिना उप्रेती, गौरी मल्ल, कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ लगायतको पहिरनमा उनीहरुलाई निकै सुन्दरी देखिएको थियो । त्यस्तै अभिनेत्री मिथिला शर्मा लगायत कलाकारका आफ्नै खालका पहिरन देखिएका थिए ।